Umhlahlandlela Wabahleli Nabahleli | Kusuka kuLinux
Umhlahlandlela Wabahleli Nabahleli
2 Izidingo zokubhala i-athikili enhle
3 Ukusebenza ngombhalo
3.1 Uma kungenzeka, ungakopishi / unamathisele
3.2 Nakisisa isipelingi
4 Ungalokothi ukhohlwe ukubeka umthombo lapho ulwazi luthathwa khona
5 Okuqukethwe okuphoqelekile
6 Sesha ngaphambi kokuthumela
7 Sebenza ngezithombe
7.1 Faka izithombe
8 Sebenza ngama-ShortCode
9 Ngisebenza ne-SEO
9.1 Ukugqamisa kwamagama agqamile nokugcizelela omalukeke
9.3 Ukusetshenziswa Kwamathegi
9.4 Impahla ye-ALT ezithombeni
10 Ukuhlukaniswa kokuqukethwe kube yizigaba
10.1 Kungani ungasebenzisi i- noma
11 Izixhumanisi ezihlala njalo
Uma ufunda lo mhlahlandlela, kungahle kube ngoba ufuna ukusebenzisana ne-LatinLinux.net futhi lokho kusigcwalisa ngentokozo.
Njengokwazi kwakho, KusukaLinux.net iyi-blog ebilokhu ithola abalandeli abaningi ngekhwalithi yama-athikili ayo nomoya womphakathi ophefumulelwa nxazonke zayo.
Sikholelwa Emphakathini nokuthi iminikelo yakho ingabaluleka kangakanani, futhi yingakho noma ngubani ofuna futhi onentshisekelo engadlulisa ulwazi lwabo nokuhlangenwe nakho ngebhulogi yethu. Asiyikhokhisi noma siyikhokhele! Kuyadingeka kuphela ukuba nesifiso sokuhlanganyela.
Lo mhlahlandlela uhlose ukukhombisa ukuthi yiziphi izinto okufanele uzicabangele lapho ushicilela i-athikili. Ukuhambisana nemingcele echazwe ngezansi akugcini nje ngokwenza izindatshana zibe ngcono, kepha kusindisa umsebenzi omningi wethimba lokuhlela.
Uma ngasizathu simbe ungalandeli izidingo ezibekwe kulo mbhalo igxathu negxathu, kungenzeka ukuthi i-athikili yakho izobambezeleka ekuvunyelweni noma ingashicilelwa nje. Sisize sisakaze ulwazi lwamahhala.
Noma yimiphi imibuzo ongaba nayo, sicela uyithumele ku-imeyili yethu staff@desdelinux.net ngesihloko esithi: Drafting Guide.
Siyabonga ngokufuna ukusebenzisana !!!
Izidingo zokubhala i-athikili enhle
Kunezidingo ezithile eziyisisekelo okufanele zibhekwe lapho kushicilelwa i-athikili ku-FromLinux. Into esemqoka ukuthi ufuna ukwabelana, kepha kufanele ufinyelele abafundi ngendlela elula, ehlanzekile nenembile. Ake sibone eminye imininingwane okufanele siyicabangele:
Uma kungenzeka, ungakopishi / unamathisele
E-DesdeLinux besihlala sizibonakalisa ngokunikela ngokuqukethwe koqobo, futhi noma ngabe i-athikili ikopishwe kusuka kwenye indawo, sihlala sizama ukuthatha lo mbono nangamagama ethu noma ngokombono wethu, sakha i-athikili entsha.
Into esemqoka ukugwema izinkinga ze-copyright, ngaphezu kokugwema izinhlawulo ezivela ku-Google ngokuqukethwe okuyimpinda. Ngale ndlela singakwazi ukunakekela izinga lekhwalithi yebhulogi.
Omunye wemisebenzi enzima kakhulu lapho ubuyekeza i-athikili ngaphambi kokuyishicilela ukulungisa ukupela amagama ngendlela engafanele, ama-accents, amakhoma, nezinye izimpawu zokubhala, kanye nokulungisa ukusetshenziswa kabi kosonhlamvukazi nabaphansi.
Ekuqaleni komusho nangamagama afanele njengokuthi Facebook y Skype Iqala ngohlamvu olukhulu lokuqala. Igama lezicelo ezifana I-Pidgin, Amarok, njll. Bangamagama afanele ngakho-ke futhi banegama lokuqala.
Sincoma ukufaka isihloli sokupela esipheqululini.
Ungalokothi ukhohlwe ukubeka umthombo lapho ulwazi luthathwa khona
Uma kwenzeka ukuthi i-athikili ofuna ukuyibhala ivela kwenye iwebhusayithi, kufanele ubeke isixhumanisi Directo kumthombo. Uma kwenzeka lowo mthombo ungenayo inguqulo yedijithali, igama, isihloko, inombolo, uhlelo, njll kusacacile. Lokhu ikakhulukazi kudaba lokuziphatha.
Izinto ezintathu okungafanele zilahleke ku-athikili yilezi:
Isithombe esivelele: Kufanele kube isithombe okungcono ngokusho kwesihloko sendatshana. Kufanele kube isithombe esigqamayo, futhi ngokulingana 4: 3, okungukuthi, ibanzi kakhulu kunokuphakeme. Imvamisa i-WordPress inakekela ukusika nokulungisa isithombe. (Ungasifaka kanjani isithombe esifakiwe ngezansi)
Izigaba: Qinisekisa ukuthi i-athikili ikuMkhakha ofanele, okumele ube yi-a kuphela ngaphandle kokuthi ubheke ukuthi kufanele futhi kube yi-athikili Kunconyiwe.
I-Etiquetas: Amathegi amagama alula noma ahlanganisiwe akhuluma ngezingxenye ezibalulekile ze-athikili. Isibonelo, uma ngabe i-athikili imayelana nohlelo olubizwa nge- I-Gedit nokusebenza kwayo ku Ubuntu, amalebula angaba gedit, ubuntu (ihlukaniswa njalo ngamakhoma). Uma i-athikili ingukukhohlisa, i-howto, noma into efanayo, khona-ke amathegi angaba njalo i-gedit, ubuntu, amathiphu, ukuthi ungakwenza kanjani.
Sesha ngaphambi kokuthumela
Ngaphambi kokuba uqale ukubhala i-athikili, kufanele uyifune kubhulogi ukuze uqinisekise ukuthi ayikaze ishicilelwe ngaphambilini.
Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokushicilela i-athikili, sebenzisa injini yokusesha yesayithi ukubona ukuthi ngabe kukhona okuvele kushicilelwe ngale ndaba. Ngale ndlela asigcini ngokugwema ukukopisha okuqukethwe, kepha singacaphuna izindatshana ezedlule ukondla okuqukethwe indaba esifuna ukuyikhuluma.
Kubalulekile ukukugqamisa lokho Zonke izithombe esizozisebenzisela i-athikili yethu kufanele zilayishwe kubhulogi futhi zingasebenzisi izinsiza zangaphandle noma izixhumanisi. Ngale ndlela siqinisekisa ukuthi zizohlala zitholakala njalo.
Ukufaka isithombe kufanele nje sichofoze inkinobho: Faka into:
Lokhu kuzosinika izinketho ezimbili: Faka amafayela o khetha isithombe esivele sivele kuMtapo Wezindaba.
Lapho ufaka izithombe ku-athikili, kufanele sicabangele amapharamitha ama-3 ayimpoqo:
Ukuthi isithombe sinombhalo ohlukile
Lokho kuphuma kuqondaniswe neSikhungo
Lokho kunosayizi omkhulu
Kufanele sihlale sikhetha isithombe esifakiwe. Uma ungasitholi isithombe sokuthunyelwe, ungasibheka kufayela le- Ilabhulali yeMultimedia ngemifanekiso etholakalayo.
Sebenzisa ama-shortcode: Le ngxenye ingahle ibe yinkohliso, kepha akunzima. Ibhulogi yethu isekela izinkomba ezithile ezinikeza ifomethi engcono yama-athikili. Ama-shortcode afakwa kubakaki, futhi kuhlala kuvulwa eyodwa futhi kuvalwa okukodwa. Ake sibone ezinye izibonelo, qaphela ukuthi sifaka isikhala ngaphakathi kubakaki ukuze i-syntax ithokoziswe:
[info] umbhalo ozoboniswa [/ info]: Le nkomba isetshenziselwa ukunikeza imininingwane eyengeziwe noma ukuphawula okuthile okuhambisanayo okungeyona ingozi. Ngokwesibonelo: [info] Isetshenziselwa ukunikeza imininingwane eyengeziwe ku-athikili [/ info]
Isetshenziselwa ukunikeza imininingwane eyengeziwe ku-athikili
[uqaphile] umbhalo ongaboniswa [/ isexwayiso]: Le nkomba isetshenziselwa ukugqamisa imininingwane ethile ebaluleke kakhulu, njengamaphutha okungenzeka nokunye. Ngokwesibonelo: [isexwayiso] Isetshenziselwa ukwenqabela okuthile okuyingozi ukukwenza ku-athikili ... [/ isexwayiso]
Kusetshenziselwe ukwenqabela okuthile okuyingozi ukukwenza ku-athikili ...
[xwayisa] umbhalo ozoboniswa [/ waxwayisa]: Le nkomba isetshenziselwa ukwazisa umsebenzisi nganoma yini, ukuze aqaphele, kepha ukuthi akuyona ingozi ukwenza njalo. Ngokwesibonelo: [warn] Isetshenziselwa ukuxwayisa nganoma yini ku-athikili [/ warn]
Kusetshenziswe ukwazisa nganoma yini ku-athikili
[winner] umbhalo azowubonisa [/ winner]: Uma sifuna ukubona umuntu noma okuthile, lesi yisibonakaliso esisetshenziselwa yona. Ngokwesibonelo: [winner] Lo ngumbhalo wokubona umuntu othile noma okuthile kokuthunyelwe [/ winner]
Lo ngumbhalo wokubona othile noma okuthile kokuthunyelwe
I-SEO ayilutho ngaphandle kwesikhundla esingasithola kuGoogle nakwezinye izinjini zokusesha, kepha ikakhulukazi kuGoogle, lokho kulula. Kepha ukuze iGoogle isinike indawo enhle, kufanele sibheke izinto eziningana lapho sibhala i-athikili yethu.
Ukuze i-athikili ibhekane neGoogle Robot, akumele abe ngaphansi kwamagama angama-300. Siyaqonda ukuthi izindatshana ezinde azikwazi ukubhalwa ngaso sonke isikhathi, kepha hlala ukhumbula lokhu njalo.
Ukugqamisa kwamagama agqamile nokugcizelela omalukeke
Lapho sibhala i-athikili, kuhle ngaso sonke isikhathi ukugqamisa esikhuluma ngakho noma izinto ezihlobene nayo. Isibonelo, uma sikhuluma nge Kubuntu, amagama afana nala: KDE, Ubuntu, njll. Amagama akwiBold atholakele ngamarobhothi okusesha futhi abekwa phambili emiphumeleni. Singagcizelela futhi ibinzana, igama noma isiqeshana ngokubeka umbhalo obhalwe ngomalukeke.
Ngokuvamile, i-athikili ingaba namathegi amaningi (amalebula), kepha ingekho imikhakha engaphezu kwezi-2. Isibonelo, uma sikhuluma nge Unity y Ubuntu, isigaba kuphela okufanele sisetshenziswe: Izindawo zedeskithophu. Zizomakwa kuphela njenge- Kunconyiwe, lezo zihloko eziqukethe imininingwane ebalulekile njenge-Tips, HowTo noma okunye ukubaluleka okukhulu.
Amathegi awusizo kakhulu lapho ufuna okuqukethwe kubhulogi, uma sisebenzisa i-url ngokwesibonelo https://blog.desdelinux.net/tag/.
Omaki abanezikhala, njenge i-linux mint, ziguqulelwa ku- I-linux-mint, ngakho-ke ukusesha izindatshana ezihlobene nale thegi sisebenzisa i-url: https://blog.desdelinux.net/tag/linux-mint. Amathegi amaningi angasetshenziswa kokuthunyelwe, kepha kungakuhle ukuthi unganwebeki ufike ngaphezu kuka-6.
Impahla ye-ALT ezithombeni
Njengoba kuchaziwe ngenhla, izithombe kumele zibe ne- Umbhalo Ohlukile, uma kungenzeka, lokho kuhlobene nesihloko noma isihloko seposi. Umbhalo Ohlukile awukhonjiswanga kuphela ezinjini zokusesha, kepha futhi unikeza imininingwane ngesithombe uma ngesizathu esithile ibingakhonjiswa. Uma sikhuluma Ubuntu, isithombe kufanele sibe nombhalo ohlukile wegama elithi Ubuntu. Akunandaba ukuthi kungaphambi noma ngemuva, noma uma kungumthandazo.
Ukuhlukaniswa kokuqukethwe kube yizigaba
Ukwehlukanisa okuqukethwe yizindatshana kube ngumkhuba onconywayo njengoba kwenza kube lula ukufunda futhi, uma kwenziwa kahle, kungathuthukisa i-SEO. Ukuze wenze lokhu, kufanele usebenzise izihloko ukufometha isihloko sesigaba. Ngokwesibonelo:
Isihloko sengxenye yendatshana yami
Isihloko sesinye isigaba
Zingasetshenziswa futhi futhi Okwezigatshana zesigaba.
Kungani ungasebenzisi i- noma
Kulula, ngoba yonke imibhalo ye-HTML ezokhonjwa kahle yiGoogle kufanele ibe neyodwa kuphela okuzohlala njalo ku-logo yewebhusayithi. Ngokulandelana kobukhosi kulandelwa ngu , lapho kuDesdeLinux kusetshenziselwa isihloko sendatshana, ngakho-ke izigaba kufanele zibe nazo phambili.
Izixhumanisi ezihlala njalo
Uma uqaphela, noma kunini lapho sibeka isihloko se-athikili ye-WordPress sibeka i-URL yayo ngaphezulu kwesihleli sombhalo:
Uma isihloko sendatshana yethu sithi, isibonelo: Umhlahlandlela Wabahleli Nabahleli, I-WordPress izosibeka njengesixhumanisi esihlala njalo: umhlahlandlela wabahleli nabahleli. Lesi sixhumanisi esihlala njalo asisibi nakancane, sifushane impela, kepha umkhuba omuhle ukushiya amagama kuphela okhiye ukuthi sifuna iGoogle isibonise kumphumela wosesho.
Isixhumanisi esihlala njalo singahlelwa ngenkinobho eseduze naso futhi kulesi sibonelo, kungakuhle ukuthi usishiye njengoba kukhonjisiwe esithombeni esingenhla: umhlahlandlela-ababhali-abahleli.
Isixhumanisi esihlala njalo asihlangene nesihloko seposi. Isihloko seposi singaba side kakhulu ngaphandle kwenkinga
Landa lo mhlahlandlela ku-PDF